Acoustic foam, Sound Barriers, Acoustic Diffuser - Vinco
Mpanjifa afa-po aman-jatony
iza i vinco
Ireo fitaovana enti-miaro ny varotra Shenzhen Vinco Co., Ltd dia miompana amin'ny fitaovana fanamafisam-peo mandritra ny taona maro ary manome R&D, famokarana, varotra ary serivisy aorian'ny fivarotana ny vokatra.
Ny vokatra Vinco dia manarona fizarazaran'asa, tontonana sounproofing, volom-baravarana fanamafisam-peo, fanamafisam-peo amin'ny rindrina, fanamafisam-peo amin'ny gorodona, fanamafisam-peo amin'ny valin-drihana, fantsom-peo fanamafisam-peo, panneaux acoustique, insulement acoustique, panneaux manintona feo, akora fanamafisam-peo, hosoka mamoaka feo sns.
Nifantoka tamin'ny tanjaka teo an-toerana i Vinco teo am-pijerena an'izao tontolo izao, duo amin'ny fanavaozana matanjaka, kalitao azo antoka ary fahombiazana avo lenta, ny vokatra Vinco dia nalaza be tamin'ny mpanjifa.
Manana andiana milina mifehy solosaina mandeha ho azy sy mpiasa teknika matihanina izahay hiantohana ny vokarantsika amin'ny kalitao avo lenta. Ny fivarotantsika isan-taona dia mety hahatratra 500.000 metatra toradroa amin'ny fitaovam-panamafisam-peo, vokatra akustika, fizarazarana mihetsika, fitaovana fitambarana. Tongasoa eto hitsidika ny ozinay mba hananganana fifandraisana fiaraha-miasa eo amin'ny sehatry ny asa maharitra. Hanolotra anao ny serivisy tsara indrindra, ny kalitao tsara ary ny vidin'ny fifaninanana.
• 2015 — Fanitarana ny haavon'ny famokarana, fivarotana isam-bolana mihoatra ny 200.000 metatra toradroa akora akustika
• 2012 — Manana tatitra fitiliana akustika am-polony ity orinasa ity.
• 2011 — Amidy eran'izao tontolo izao ny vokatra avy amin'ny orinasa.
• 2009 — Fanamarinana tratry ny SGS, CE, CMA, ilac-MRA, CNAS.
• 2007 — Fanokafana ny ozinina fitaovana fanamafisam-peo Vinco any Shenzhen ary nanomboka famokarana lehibe.
• 2003 — Orinasa fitaovana tsy misy feo azo alefa an'ny Shenzhen Vinco.
Ny kalitao no iray amin'ireo laharam-pahamehana aminay.
Hatsarao hatrany ny haavon'ny fitantanana mba hanome toky ny mpanjifa.
Fehezo tsara arakaraka ny fenitra mba hiantohana ny tahan'ny kalitaon'ny fandefasana 100%.
Fahitana:Ho naman'ny mpanjifa manerantany. Manome sanda ambony indrindra ho an'ny mpanjifa, ny mpiasa ary ny tompon-trosa.
Iraka: Manome serivisy avo lenta sy ara-potoana ary mahafa-po amin'ny famokarana sy fivorian'ny acoustics.
orinasa iza no iasantsika
Ny vokatra Vinco dia manarona fizarazaran'asa, tontonana sounproofing, volom-baravarana fanamafisam-peo, fanamafisam-peo amin'ny rindrina, fanamafisam-peo amin'ny gorodona, fanamafisam-peo amin'ny valin-drihana, fantsom-peo fantsom-panafody, takelaka akustika, fanamafisam-peo akorika, takelaka fanamafisam-peo, fitaovana fanamafisam-peo, fanosotra amin'ny feo ary sns.
ahoana no ataontsika
Ny fitehirizana ny fitateram-bahoaka amin'ny fitaterana, ny fikojakojana isan'andro ary ny fomba fanadiovana
Tombontsoa folo amin'ny vokatra vita amin'ny birao mahaliana
(1) Tsy tantera-drano sy tsy misy hamandoana. Ny olan'ny vokatra vita amin'ny hazo bei ...
Inona ny teknolojia fananganana tabilao manintona feo?
1. Inona ny fizotry ny fanamboarana ny tabilao mandray feo? C ...
Ahoana no hanavahana ny kalitaon'ny takelaka mandray feo? Jerevo fotsiny ny lafiny 6
Ny kalitaon'ny takelaka mandray feo dia mamaritra ny fanamafisam-peo ...
Ahoana ny fomba hisafidianana akustika fitaovana? Ary ireo fampiasana samihafa
Fitaovana akustika telo mahazatra akora akustika (manondro ...
Fiomanana savaranonando amin'ny fametrahana takelaka manafaka feo
Ity manaraka ity dia ny asa fanomanana ny fametrahana ny woode ...
Ahoana ny fomba hisafidianana fitaovana insulateur an-trano?
Fomba fanamafisam-peo dimy mahazatra, izay mila ampifanarahana ...
Ahoana ny fomba hanaovana rindrina tsy misy feony? Karazana rindrina tsy misy feona inona no tsara?
Ahoana ny fomba hanaovana rindrina tsy misy feony? 1. Fametrahana ny elastika ...
Fampiasana an-trano inona no vokatra azo avy amin'ny insulated feo?
Betsaka ny fitaovana fanamafisam-peo ao anaty, ary misy ny ...
Ireo takelaka mahavoaka feo dia manana ireo fitaovana manokana samihafa ireo
Ny karazan-karazan-tariby voalohany-filamatra vita amin'ny feo-polyester ...